တရုတ်က အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်းများကို သွင်းကုန်ခွန် ကောက်ခြင်းမှာ မိမိ၏ အရှုံးကို ပြန်ကာမိစေရန?? - Yangon Media Group
တရုတ်က အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်းများကို သွင်းကုန်ခွန် ကောက်ခြင်းမှာ မိမိ၏ အရှုံးကို ပြန်ကာမိစေရန??
ပေကျင်း၊ ဧပြီ ၃
တရုတ်က အမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်း ၁၂၈ မျိုးအပေါ် သွင်းကုန်ခွန် စည်းကြပ်လိုက်ခြင်းတွင် ဝိုင်အရက်မှသည် လိမ္မော်သီးအထိ ပါဝင် နေရာ အမေရိကန်၏ အခွန်တိုးမြှင့် မှုအပေါ် တရုတ်၏အရှုံးကိုကာမိ စေရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ခြင်းသာဖြစ် ကြောင်း တရုတ်ပြည်သူ့နေ့စဉ် သတင်းစာ ၏ ရှေ့မျက်နှာဖုံးတွင် ဧပြီ ၃ ရက် ကဖော်ပြလိုက်သည်။
တရုတ်က ဧပြီ ၂ ရက်တွင် နောက်ထပ် သွင်းကုန်ခွန် ၂၅ ရာ ခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို ဒေါ်လာ သုံးဘီလီယံဖိုးအထိ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်က တရုတ်၏ စတီးနှင့် အလူမီနီယံအပေါ် သွင်းကုန်ခွန်တိုး မြှင့်မှုကို လက်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန် အစိုးရသည် ကနေဒါနှင့် တောင်ကိုရီးယားတို့၏ သံမဏိနှင့် အလူမီနီယံသွင်းကုန် ခွန်ကို သက်သာခွင့်ပေးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် တရုတ်ကို သက်သာခွင့် မပေးခဲ့ပေ။ တရုတ်၏ အခွန်စည်းကြပ်မှု မှာ သင့်တင့်ရုံသာရှိသည်။ အမေ ရိကန်အစိုးရကို သတိပေးရုံမျှသာ ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်က တရုတ် နည်းပညာပစ္စည်းများကို စည်းကြပ် ရန် ယခုအပတ်၌ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန် ထုတ်လုပ်သူများ က တရုတ်၏ လက်တုံ့ပြန်မှု အကြီး အကျယ်လုပ်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေ ကြသည်။ အထူးသဖြင့် လေယာဉ် ပျံများ၊ ပဲပုပ်ပဲများနှင့် မော်တော် ကားများအပေါ် စည်းကြပ်လာမည် ကို စိုးရိမ်နေကြသည်။
တရုတ်က ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ ကို မလိုလားသော်လည်း တရားမျှ တမှုကို လိုလားသည်။ တရုတ်က ရွေးစရာ လမ်းမရှိတော့ပါက စစ်ပွဲ တစ်ခုပြီးဆုံးရန် စစ်ပွဲတစ်ခုထဲသို့ ဝင်ရောက်ရတော့မည်ဟု ဆိုသည်။ ထရန့်က ယခုအပတ်တွင် တရုတ်ထံမှ သွင်းကုန်ခွန် ကောက် မည်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ တရုတ်က ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်မည်ကို မလို လားဘဲ အမေရိကန်အား ကုန် သွယ်ရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တရုတ်က ခင် မင်မှုမပျက်သော သဘောတူညီ ချက်ကို ရယူလိုကြောင်း တရုတ်နေ့ စဉ်သတင်းက ရေးသားခဲ့သည်။
''အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဝါသနာလည်း ပါတာကြောင့် တစ်ခုချင်းစီကို သေချာလုပ်သွားမှာပါ'' ဇွန်သံစဉ်
မြဝတီခရိုင် အတွင်းရှိ မသန်စွမ်း ၄၉၄ ဦးကို တစ်ဦးလျှင် ကျပ်တစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ကြေ??
ကျပ်ဘီလီယံ ၁၅၀ ကျော်ကုန်ကျမည့် ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းလှိုင် သာယာတွင်တည်ဆောက်ရန် လွှတ်?
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လမ်းများ၏အရည်အသွေးကို အရည်အသွေးစိစစ်သည့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဖြင
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ ရန်ပုံငွေဖြင့် စစ်တွေ မြို့မဈေးကြီး အပါအဝင် မြို့တွင်းရှိ ဈေးလေးစေ??
၂၁ ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်း အဝေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) ဆံ